Hery Rajaonarimampianina : Fifidianana ihany no vaha olan’ ny fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Fifidianana ihany no vaha olan’ ny fampandrosoana
28/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nidera ny firaisan-kinan’ireo ben’ ny tanana tonga maro teny Iavoloha ny filoham-pirenena hery Rajaonarimampianina na teo aza ny fandrirarirana nisintonana azy ireo ho any amin’ ny toeran-kafa ny asabotsy lasa teo nandritra ny fihaonana teny amin’ ny lapam-panjakana Iavoloha, noho izany dia nanambara ny filloham-pirenean fa « mijoro anatin’ ny firaisan-kina, fahavononana, fahasahiana satria izany no ilain’ ny firenena »hoy hatrany ny filoham-pirenena malagasy. Ady no hatrehana hoy ny filoha dia ny ady amin’ ny fahantrana, kolikoly, herisetra ary ady amin’ ny tsy fitiavana ihany koa, ka mahatsiro manana namana manana miaramila vonona hiady ny filoha Hery Rajaonarimampianina noho ny fahatongavan’ ireo ben ‘ny tanana maro nanohana ny antsony ka iza no tsy hataotra. Nohamafisin’ ny filoha fa miaramila tsy hanapoaka basy fa saingy kosa miaramila hanatanteraka ny asany ampahamendrehana. Noho izany dia nohamafisin’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa « fa tsy rehefa tsy miteny akory dia resy ary rehefa mangina akory dia resy, hoy ao hoe mbola mafy kokoa ny kiaka ny fahanginana noho ny fitabatabana sy ny fikikana eny an-dalana amin’ ny vava. Izay no herintsika amin’ izao fotoana izao , satria izay no tena fisadratana . Betsaka no nahery setra tany aloha, betsaka no nampiasa fiadiana tany aloha nankaiza izy, betsaka no niantso tami’n ny zavatra maro samy hafa saingy aiza izany fa tsy tao anaty fahantrana ve» hoy ny filoha.
Noho izany raha fampandrosoana no ilaina eto amin’ ny firenena hoy ny filoha Hery Rajaonarimampinina dia tsy misy hafa tsy ny fitoniana sy ny filaminana politika ihany no ilaina , ary hametrahana izany eo amin’ ny lafiny demokratika fifandimbiasam-pahafena amin’ ny halalan’ ny fifidianana ihany ka ny vahoaka no hifidy izay olona tiany satria izay no fototry ny fanajana ny hevitry ny vahoaka maro an’isa izay mifidy sy mpanapaka ary andriamanjaka eo amin’ ny firenena. Ary izany dia mila hajaina ary ampidirina antsain’ ny fisainana ny tsirairay avy indrindra ho an’ ny mpitondra sy ny mpitarika hoy ny filoham-pirenena malagasy. Noho izany hoy ny filoha dia tsy eny andalam-be no andraisana ny fitondrana sy hiadiana ny fitondrana , fa raha te hifandrefy dia any anaty fifidianana. Aoka ho sahy hijoro sy hifandrefy ao anatin’ izany fifidianana izany ny rehetra. Nandritra izany dia hentitra ny filoham-pirenena nilaza fa tao anatin’ ny dimam-polo taona nisian’ny mpitondra teto amin’ ny firenena izay miisa 13 nifandimby ary dimy ihany no nandalo tamin’ ny fifidianana, ny ambiny dia tonga teo tsy tamin’ ny halalan’ ny fifidianana, ny hafa moa izay mbola miheritreritra izany ihany no lalana tiany atao hahazoana fitondrana hoy ny filoha. Noho izany tsy azo ekena intsony izany hoy ny filoham-pirenena hery Rajaonarimampianina satria fampandrosoana no ilaina izao.